फोहरपुरी ! कान्तिपुरी नगरी – Tandav News
फोहरपुरी ! कान्तिपुरी नगरी
ताण्डव न्यूज द्वारा २०७५ भाद्र २० गते बुधबार १७:४३ मा प्रकाशित
र्शिर्मला पाठक र सञ्चिता घिमिरे
झण्डै एक महिनादेखि घरमा फोहर लिन गाडी नआउँदा कोटेश्वरकी चन्द्रकला फुयाँल हैरान छन्। एकातिर घरमा फोहर फाल्ने ठाउँ छ्रैन, अर्कातिर घर अगाडिको फोहरको दुर्गन्ध भान्सासम्म आउँछ ।
“फोहर लगेको भन्दै पैसा लिन भने प्रत्येक महीना ढोकामा घण्टी बज्छ तर समयमा नै फोहर व्यवस्थापन हुन नसक्दा दैनिक कामकाजमा नै समस्या भएको छ” गृहिणी फुयाँलले भने । हुन त काठमाडौँ उपत्यकामा फोहर थुप्रिएको यो पहिलो पटक होइन । वर्षौदेखिको समस्या जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि हल हुने स्थानीयवासीले आशा गरे पनि समस्या घट्नाको साटो बढ्दो छ । दुई साताभन्दा पहिलेदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर उठ्न सकेको छैन ।
फोहरमैला व्यवस्थापन काठमाडौँ उपत्यकाको १८ वटै तहको समस्या भएकाले सामूहिक रुपमा समाधान खोज्न खाँचो रहेको कामपा, वातावरण महाशाखा प्रमुख हरि कुँवरले जानकारी दिए । उनले भने ,“सबै मिलेर वैकल्पिक उपायको खोजी गर्नुपर्छ, महानगरपालिकाले मात्रै गरेर हुँदैन ” केन्द्र सरकारले पनि यसमा चासो देखाउने खाँचो देखिने बताइएको छ ।
यता ललितपुर महानगरपालिकामा पनि दिनदिनै फोहर बढिरहँदा स्थानीयवासी हैरान छन् । चोक र सडकमा थुप्रिएको फोहरले दुर्गन्ध फैलिएपछि केही दिन पहिले बालकुमारीस्थित खुला जग्गामा फोहर लगिएको लमपाले जनाएको छ । चोकको फोहर मात्रै उठाइएको महानगरपालिकाका प्रवक्ता राजु महर्जनले बताए। उनले भने , “बालकुमारीमा सीमित खाली जग्गा मात्र हुँदा हामीले सडकमा रहेको फोहर भने उठाउन सकेका छैनौंँ ।” ओखरपौवामा फोहर लगिनासाथ समस्या समाधान हुने लमपाले जनाएको छ ।
लमपाले आफ्नो क्षेत्र र छिमेकी नगरपालिकासँग फोहरमैला व्यवस्थापनको वैकल्पिक स्थानको खोजी गरेको थियो । ललितपुुरका धेरै ठाउँ हवाई मार्गमा पर्ने हुँदा ल्याण्डफिल साइटको सम्भावना नभएको प्रवक्ता महर्जनले बताए । “स्थानीयवासीलाई सजग गराएर फोहरको उत्पादन कम गर्न भने सकिन्छ”, महर्जनले भन्नुभयो, “कुहिने र नकुहिने फोहर अब स्रोतबाट नै छुट्याउन आवश्यक रहेको छ ।”
एक महीनाअघि मात्र ल्याण्डफिल साइटको अल्पकालीन र दीर्घकालीन व्यवस्थापनको उपाय सुल्झाउन महानगरका सहसचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाको संयोजकत्वका पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो । समितिले एक महीना बितिसक्दासम्म पनि समाधानका लागि कुनै उपाय दिनसकेको छैन । मरहठ्ठा आफैंँ कामपाबाट सरुवा भएर अन्यत्र गइसकेका छन् ।
सम्झौताभन्दा लामो समयसम्म निरन्तर फोहर थुपार्दै आएकाले आफूहरूको दैनिक कामकाजमा समस्या आएकाले सिसडोलका बासिन्दाले तत्काल फोहर व्यवस्थापनको काम अन्त्य गर्न कामपालाई आग्रह गर्दै आएका छन् । अहिले सिसडोलमा थुपारिएको फोहर माटाले पुर्ने र नयाँ फोहरको व्यवस्थापन गरिँदै आएकाले फोहरको पहाड नै बनिसकेको छ ।
१ सय ४९ जनाले गराए मधुमेह परीक्षण
२ लाख मात्रा खोप माल्दिभ्सबाट नेपाल आइपुग्यो